Adobe ဆိုတာဘယ်ကစခဲ့တာလဲ ?
1 Jun 2018 . 5:15 PM
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူတွေ၊ Photo Editing နဲ့ Video Editing နယ်ပယ်မှာ အလုပ်လုပ်နေသူတွေအားလုံးနေ့တိုင်းလိုလိုကြားဖူးနေတဲ့ Photoshop ၊ Premire Pro ၊ After Effect တို့ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Adobe ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Adobe (အပ်ဒိုဘီ) ဆိုတဲ့အသုံကိုကြားရင် အိန္ဒိယ အခေါ်အဝေါ်နဲ့ နည်းနည်းဆင်သယောင်ရှိတာကြောင့် ကုမ္ပဏီ နဲ့ တည်ထောင်သူတွေဟာ အိန္ဒိယ ဘက်ကဖြစ်မယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။
အမှန်တော့ Adobe ဆိုတဲ့နာမည် ဟာ Adobe Creek ဆိုတဲ့အမည်ကနေဆင်းသက်လာတာပါ။ ၄င်းကို အမေရိကန်နိုင်ငံ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရှိ Los Altos မြို့က Founder Warnock ရဲ့ အိမ်အနောက်ဘက်မှာ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 1982 ဒီဇင်ဘာလမှာ မှာတော့ John Warnock နဲ့ Charles Geschke (တွဲဖက်တည်ထောင်သူ) တို့နှစ်ဦးက Adobe ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Adobe System ရဲ့သက်တမ်းဟာ အခု ( ၂၀၁၈ခုနှစ်) မှာဆိုရင် ၃၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးချုပ်ကိုတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် San Jose မြို့မှာတည်ဆောက်ထားပါတယ်။
John_Warnock_အသက် ၇၇ နှစ်
Adobe ရဲ့ Logo ကိုတော့ Warnock ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ Graphic Designer Marva Warnock ကရေးဆွဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး Adobe မှာပါဝင်တဲ့ “A” ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့အနေနဲ့ ဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။
Adobe ကို Apple ရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ Steve Jobs က 1982 မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ သန်းနဲ့ဝယ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခြင်းခံရဖူးပေမယ့် Founder နှစ်ဦးကရောင်းချဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ Adobe ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေက Jobs နဲ့အလုပ်တချို့တွဲလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းတာကြောင့် ရှယ်ယာ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းကိုရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။
Adobe ရဲ့ လက်ရှိ CEO ကတော့ အိန္ဒိယ အမေရိကန် ကပြားလူမျိုး Shantanu Narayen ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအသက်ကတော့ ၅၆ နှစ်ရှိပါပြီ။
Adobe ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Product ကတော့ Illustrator 88 ဖြစ်ပြီး ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှာစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Photoshop 1.0 ကိုတော့ Apple ရဲ့ Mac Computer မှာအသုံးပြုဖို့အတွက် ၁၉၉၀ မှာထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့ ဒီနေ့ခေတ်မှာအသုံးများနေတဲ့ PDF Format ဆိုတာဟာလည်း Adobe System ကပဲဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Photoshop 1.0 ကို Mac Computer ပေါ်မှာတွေ့ရစဉ်
နောက်ပိုင်းမှာတော့ Graphic design software, Web design programs, Video editing and visual effects, Audio editing software, eLearning software, Digit al Marketing Management Software, Server software, Web-hosted services နဲ့ Adobe Stock ဆိုတဲ့ Product တွေကိုနယ်ပယ်အသီးသီးအတွက်ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Adobe ရဲ့လူသုံးအများဆုံး Product တွေကတော့ ဓါတ်ပုံပြင်ဖို့အတွက် Adobe Photoshop CC ၊ Adobe Illustrator ၊ Video တည်းဖြတ်ဖို့အတွက် Adobe Premiere Pro နဲ့ Video Effect တွေပြုလုပ်ဖို့အတွက် Adobe After Effect တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ကောင်းမွန်လာတဲ့ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေနဲ့အတူ Update တွေအမြဲထုတ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
Adobe ထုတ်ကုန်တချို့ရဲ့ Logo များ
Adobe ရဲ့အသားတင်အမြတ်ငွေကတော့ 2017 ခုနှစ်အတွက်တွက်ချက်မှုအရ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၆၉ ဘီလီယံရှိပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းအရေအတွက်ကတော့ ၁သိန်း၇သောင်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပညာသည်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးရဲ့ ပတစ်နှစ်လုပ်ခက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉သောင်းကနေ ၁သိန်းခွဲအတွင်းရှိတယ်လို့ Payscale ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရှိရပါတယ်။
Ref; Wiki , Payscale
Adobe ဆိုတာဘယျကစခဲ့တာလဲ ?
ဒီတဈခေါကျမှာတော့ ကှနျပြူတာအသုံးပွုသူတှေ၊ Photo Editing နဲ့ Video Editing နယျပယျမှာ အလုပျလုပျနသေူတှအေားလုံးနတေို့ငျးလိုလိုကွားဖူးနတေဲ့ Photoshop ၊ Premire Pro ၊ After Effect တို့ကိုထုတျလုပျခဲ့တဲ့ Adobe ကုမ်ပဏီအကွောငျးကိုတငျဆကျပေးခငျြပါတယျ။ Adobe (အပျဒိုဘီ) ဆိုတဲ့အသုံကိုကွားရငျ အိန်ဒိယ အချေါအဝျေါနဲ့ နညျးနညျးဆငျသယောငျရှိတာကွောငျ့ ကုမ်ပဏီ နဲ့ တညျထောငျသူတှဟော အိန်ဒိယ ဘကျကဖွဈမယျလို့ယူဆနိုငျပါတယျ။
အမှနျတော့ Adobe ဆိုတဲ့နာမညျ ဟာ Adobe Creek ဆိုတဲ့အမညျကနဆေငျးသကျလာတာပါ။ ၎င်းငျးကို အမရေိကနျနိုငျငံ ကယျလီဖိုးနီးယားပွညျနယျရှိ Los Altos မွို့က Founder Warnock ရဲ့ အိမျအနောကျဘကျမှာ စတငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ 1982 ဒီဇငျဘာလမှာ မှာတော့ John Warnock နဲ့ Charles Geschke (တှဲဖကျတညျထောငျသူ) တို့နှဈဦးက Adobe ကုမ်ပဏီကိုတညျထောငျခဲ့ကွပါတယျ။ Adobe System ရဲ့သကျတမျးဟာ အခု ( ၂၀၁၈ခုနှဈ) မှာဆိုရငျ ၃၆ နှဈရှိပွီဖွဈပါတယျ။ ရုံးခြုပျကိုတော့ အမရေိကနျနိုငျငံမှာရှိတဲ့ ကယျလီဖိုးနီးယားပွညျနယျ San Jose မွို့မှာတညျဆောကျထားပါတယျ။
John_Warnock_အသကျ ၇၇ နှဈ
Adobe ရဲ့ Logo ကိုတော့ Warnock ရဲ့ ဇနီးဖွဈသူ Graphic Designer Marva Warnock ကရေးဆှဲပေးခဲ့တာဖွဈပွီး Adobe မှာပါဝငျတဲ့ “A” ကိုကိုယျစားပွုတဲ့အနနေဲ့ ဖနျတီးခဲ့တယျလို့ဖျောပွထားပါတယျ။
Adobe ကို Apple ရဲ့ဖခငျကွီးဖွဈတဲ့ Steve Jobs က 1982 မှာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၅ သနျးနဲ့ဝယျယူဖို့ကမျးလှမျးခွငျးခံရဖူးပမေယျ့ Founder နှဈဦးကရောငျးခဖြို့ ငွငျးဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာ Adobe ရဲ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတှကေ Jobs နဲ့အလုပျတခြို့တှဲလုပျဖို့ တိုကျတှနျးတာကွောငျ့ ရှယျယာ ၁၉ ရာခိုငျနှုနျးကိုရောငျးခပြေးခဲ့ပါတယျ။
Adobe ရဲ့ လကျရှိ CEO ကတော့ အိန်ဒိယ အမရေိကနျ ကပွားလူမြိုး Shantanu Narayen ဖွဈပွီး ၂၀၀၅ ခုနှဈမှာစတငျလုပျကိုငျခဲ့ပါတယျ။ လကျရှိအသကျကတော့ ၅၆ နှဈရှိပါပွီ။
Adobe ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Product ကတော့ Illustrator 88 ဖွဈပွီး ၁၉၈၆ ခုနှဈမှာစတငျထုတျလုပျခဲ့ပါတယျ။ Photoshop 1.0 ကိုတော့ Apple ရဲ့ Mac Computer မှာအသုံးပွုဖို့အတှကျ ၁၉၉၀ မှာထုတျလုပျပေးခဲ့ပါတယျ။ နောကျထပျစိတျဝငျစားစရာကောငျးတာကတော့ ဒီနခေ့တျေမှာအသုံးမြားနတေဲ့ PDF Format ဆိုတာဟာလညျး Adobe System ကပဲဖနျတီးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Photoshop 1.0 ကို Mac Computer ပျေါမှာတှရေ့စဉျ
နောကျပိုငျးမှာတော့ Graphic design software, Web design programs, Video editing and visual effects, Audio editing software, eLearning software, Digit al Marketing Management Software, Server software, Web-hosted services နဲ့ Adobe Stock ဆိုတဲ့ Product တှကေိုနယျပယျအသီးသီးအတှကျထုတျလုပျပေးခဲ့ပါတယျ။ Adobe ရဲ့လူသုံးအမြားဆုံး Product တှကေတော့ ဓါတျပုံပွငျဖို့အတှကျ Adobe Photoshop CC ၊ Adobe Illustrator ၊ Video တညျးဖွတျဖို့အတှကျ Adobe Premiere Pro နဲ့ Video Effect တှပွေုလုပျဖို့အတှကျ Adobe After Effect တို့ပဲဖွဈပါတယျ။ တဈနှဈထကျတဈနှဈ ကောငျးမှနျလာတဲ့ပွောငျးလဲတိုးတကျမှုတှနေဲ့အတူ Update တှအေမွဲထုတျပေးလရှေိ့ပါတယျ။
Adobe ထုတျကုနျတခြို့ရဲ့ Logo မြား
Adobe ရဲ့အသားတငျအမွတျငှကေတော့ 2017 ခုနှဈအတှကျတှကျခကျြမှုအရ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁.၆၉ ဘီလီယံရှိပွီး တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ ဝနျထမျးအရအေတှကျကတော့ ၁သိနျး၇သောငျးရှိတယျလို့ဖျောပွထားပါတယျ။ ပညာသညျဝနျထမျးတဈဦးရဲ့ ပတဈနှဈလုပျခက အမရေိကနျဒျေါလာ ၉သောငျးကနေ ၁သိနျးခှဲအတှငျးရှိတယျလို့ Payscale ရဲ့ဖျောပွခကျြအရသိရှိရပါတယျ။